Shiinaha 99% Alpha Lipoic Acid budada cas 1077-28-7 DL-Thioctic acid warshad iyo alaab-qeybiyeyaal | Aragtida
99% Alfa Lipoic Acid budada cas 1077-28-7 DL-Thioctic acid
Alpha Lipoic acid waa daawooyin fiitamiin ah, dhaqdhaqaaq jireed oo xaddidan oo ku saabsan qaybtiisa guud, asal ahaan wax dhaqdhaqaaq jireed ah oo ku jira Lipoic acid, iyo wax saameyn ah ma leh. Had iyo jeer waxaa loo isticmaalaa cagaarshow ba'an iyo dabadheeraad ah, cirrhosis beerka, coma cagaarshow, beerka dufanka leh, sonkorowga, cudurka Alzheimers, oo loo isticmaalo sida wax soo saarka caafimaadka antioxidant.
Magaca Badeecada: Alfa Lipoic Acid
Iskuxidhka: α-Lipoic Acid; DL-Thioctic acid; 6,8-Dithiooctanoic acid
CAS Lambar 1077-28-7
Qaaciddada Molecular: C8H14O2S2
1. Alfa lipoic acid waa asiidh dufan leh oo si dabiici ah looga helo gudaha unug kasta oo jidhka ah.
2. Alpha lipoic acid jirka ayaa ubaahan si uu usoo saaro tamarta shaqooyinka caadiga ah ee jirkeena.
3. Alpha lipoic acid waxay gulukoosta (sonkorta dhiiga) u badashaa tamar.
4. Alfa lipoic acid sidoo kale waa antioxidant, walax dhexdhexaad ka dhigta kiimikooyinka waxyeelada u geysan kara ee loo yaqaan xagjirnimada bilaashka ah. Maxaa ka dhigaya alpha lipoic acid mid gaar ah waa inay ku shaqeyso biyaha iyo dufanka.
5. Alpha lipoic acid waxay umuuqataa inay awood u leedahay inay dib u warshadeyso antioxidants sida fitamiin C iyo glutathione kadib marka la isticmaalo. Alpha lipoic acid waxay kordhisaa sameynta glutathione.
1. Alfa lipoic acid waxay hagaajin kartaa waxqabadka koritaanka iyo waxqabadka hilibka si loo kordhiyo faa'iidooyinka dhaqaale;
2. Alfa lipoic acid wuxuu noqon doonaa isuduwidda dheef-shiid kiimikaad ee Sonkorta, Dufanka iyo Amino Acid si loo hagaajiyo shaqada difaaca xoolaha;
3. Alfa lipoic acid loo isticmaalo in lagu ilaaliyo oo kor loogu qaado nuugista iyo isbeddelka VA, VE iyo nafaqeynta kale ee oksaydhka ee quudinta sida antioxidant;
4. Alfa lipoic acid waxay leedahay wax ku ool ah si loo hubiyo loona hagaajiyo wax soo saarka xoolaha iyo digaagga iyo wax soo saarka ukunta ee deegaanka kuleylka-kuleylka.
5. Lagu dabaqay qaybta daawada.
Budada madoobeysa oo xoogaa huruud ah, udgoon udhow
Tijaabada Lead Acetate iyo habka UV IR: Wanaagsan
Si ficil ahaan u-milmi la'aanta biyaha iyo isku-milmika dareeraha dabiiciga ah
Xadka maadada polymerka
Maaddada la xidhiidha (Waxaa qoray HPLC）
6.8-Epitrithlooctanolic acid (EPI)
Wasakh keli ah
Haraaga slovene (Waxaa qoray GC）
Yl Ethyl acetate
Lama ogaan karo
Wadarta saxan tirinta
C 10 CFU / g
Caaryado iyo khamiir
Maqnaansho / g
Ma ahan wax la ogaan karo
100% illaa 40 mesh
Cufnaanta badan ee dabacsan
Wax soo saarka tijaabada wuxuu u hoggaansamayaa shuruudaha USP38 Standard
20kg / 25kg / kartoon ama durbaan
Hore: 99% Diacetone acrylamide (DAAM) CAS 2873-97-4
Xiga: Nadaafad sare Dodecyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride (Benzalkonium Chloride 80%) (ADBAC / BKC) cas 8001-54-5 ama 63449-41-2
99% Alfa Lipoic Acid
Budada Alpha Lipoic Acid
dhexdhexaadiyaha caafimaadka Sodium taurocholate powde ...
Qiimaha wanaagsan ee dhexdhexaadiyaha dawooyinka Fusidin ...
Tayo sare USP / JP fasalka Salicylamide cas 65-45-2
Qiimo wanaagsan 99% daahir ah 3-aminophenylacetylene HC ...